Ungangibonisa ukuthi ungakha kanjani ibhizinisi kumaslinksi yangemuva yebhizinisi mahhala?
Kufana nanoma yimaphi amanye ama-backlink wezinhloso ze-SEO, amabhange emuva kwebhizinisi ahambisana nomgomo ofanayo - thola ithrafikhi eyandayo eya kuwebhusayithi yakho ngqo kusuka kusesho lwezinto eziphilayo. Asikho isidingo sokuthi ama-backlink asetshenziswa yi-Google mhlawumbe njengesici esiphezulu kunazo zonke. Yingakho kudingekile ukuthi ukhokhele ngokwanele ukwakha ama-backlink aphezulu aphezulu azoxhasa uhlelo lwakho jikelele lokumaketha nokunyusa esikalini - cheap vps hosting deals. Ake sibhekane nakho - ukwakha ibhizinisi kuya emuva kwamabhizinisi kuthatha isikhathi esiningi nomzamo. Noma kunjalo, kungaba lula nje ukuqala - futhi kancane kancane uye phambili ekuholeni nokulawula i-niche yakho ekusesheni kwe-inthanethi. Vele uqhubeke nalezi zindlela ezingalindelekile ezichazwe ngezansi. Uma usuzame konke, zikhululeke ukufaka isicelo nganoma iyiphi enye imikhuba enengqondo yokwakha ibhizinisi kuma-backlink ebhizinisi kuwebhusayithi yakho. Ngakho-ke, zikhona izinqubo eziningana ezilula kodwa ezisebenzayo zokwenza iwebhusayithi yakho yebhizinisi ingahlali emncintiswaneni - ngaphandle kokuchitha imali.
Izinkomba Zendawo Nezentengiselwano Zebhizinisi
Ngincoma ukusebenzisa izinkomba zendawo, izinkomba zewebhu kanye nokufakwa ohlwini kwe-intanethi njenge-"kickass" enkulu eqala ukwakha ibhizinisi amabhalansi emuva kwebhizinisi. Lokho kungaba indawo efanelekayo ephelele ukuqala ukuthola ukuchayeka kabanzi kwe-intanethi kuwebhusayithi yakho. Eqinisweni, iningi lalezi zinsizakalo zohlobo lwemibhalo zibeka kahle kakhulu ezinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google. Ngakho-ke, konke okudingayo kusho igama lakho lebhizinisi ngemininingwane yokuxhumana futhi uthole leyo backlink efanelekile ngokubuyisela. Izibonelo ezingcono zihlanganisa i-Google Bhizinisi Lami, amakhasi aphuzi, i-Yelp, i-Bing Business Listing, i-Truelocal, njll.
Lezizindawo ezinabantu abaningi ziwusizo kakhulu ukusetha ubukhoma obuqinile ku-intanethi yebhizinisi lakho futhi wenze igama lakho lomkhiqizo livezwe kuzilaleli ezibanzi zabasebenzisi abakhuthele. Konke okudingayo ukubamba ezinye izixhumanisi kuma-social media kudala amaphrofayela omphakathi wenkampani yakho - futhi usuqedile. Qinisekisa ukusingatha umsebenzi ohleliwe noqhubekayo namaphrofayli akho webhizinisi - ungangabazi ukutshala isikhathi esithile ngokubhala okuthunyelwe okujwayelekile okuzoshicilelwa ngokuqondile ngqo kuwebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko. Ngaleyo ndlela, awukwazi ukuthola kuphela ama-backlink engeziwe, kodwa uzuze kumgwaqo wewebhu ophezulu.
Ukukhishwa kwezindaba nokulondolozwa kwabamenyiwe
Nakuba lezi zindlela ezimbili zokuqala zokuthola ibhizinisi kuma-backlink ebhizinisini zingaphansi kwesinye isizathu, zingakwazi ukukukhonza kahle. Ngokujulile, ungahlala uthola amanye amawebhusayithi adumile wokushicilelwa we-press okwenzelwe okuqukethwe okusha. Into ewukuthi ngokushicilelwa okubhalwe phansi kahle ngesihloko esishisayo esihlobene nembonini yebhizinisi lakho noma imakethe yezimakethe - ungasheshe uphakanyiswe nomphakathi wendawo wezindaba nosuku lokubhulozela ukutholakala komphakathi okusheshayo nokubanzi. Ukusabalalisa umhlaba ngokushicilela kwakho okuphambili, ngincoma ukugxila ekukhuthazeni umkhiqizo omusha noma isevisi ukuze i-backlink ibonise indlela eya kuwebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa. Ngokufana nokushicilelwa kwezindaba, abebhulogi bezithameli kufanele bachithe isikhathi esithile - ngokuqinisekile kuzokhokha! Vele uthole konke okuvunyelwene nomthonya onamandla noma umnikazi webhulogi - futhi uthumele i-athikili yakho ehambisanayo ukuze uthole i-backlink ngokubuya. Qaphela, ukuthi phakathi kwezinye izindlela ezikhangayo zokwakha isixhumanisi, ukubhalisa izivakashi kuFANELE kulabo abafuna ama-backlink aphezulu e-PR nge-DoFollow. Vele uqiniseke ukuthi uzobhalela ibhulogi efanele ye-niche enephuzu elanele le-PR.